Cudur iyo Abaar Miciin La,aan ah, Ismamulka Somalida – Rasaasa News
Cudur iyo Abaar Miciin La,aan ah, Ismamulka Somalida
January 3, 2017 – Wararka ka imanaya magaalada Jijiga ee xarunta Ismaamulka Somalidu, waxay sheegayaan in cudur iyo abaar xun ay ka jiraan dhamaan degmooyinka iyo gabalada.
Cudurka faafaya ee daacuun calooluhu wuxuu ka bilowday degaanka Somalida (Ogaden) badhtamihii bishii October 2016. Ka dib, Cudurka daacuun calooluhu, wuxuu u gudbay dalka Somaliya gaar ahaana gabalada dariska la ah Ismaamulka Somalida.
Television-da dalka Somaliya waxay si joogta ah u baahiyaan dhibaatooyinka cudurka daacuun caloolaha oo ka soo talaabay degaanka Ismaamulka Somalida iyo waliba abaaraha ay keentay roob la,aantu.
Bishii, November 15, 2016 tirada dadka u dhintay cudurka Daacuun caloolaha Ismaamulka Somalidu, waxay ahayd 176 ruux, sida aan ka soo xiganay saraakiisha caafimaadka Ismaamulka Somalida. Saraakiishu waxay sheegtay in ay u awood la,a yihiin xakamaynta cudurka daacuun caloolaha, una baahanyihiin dawooyin iyo qalabka fayo dhawrka.
Abaarta, ayaa iyada lafteedu waxay ka bilaabtay Ismaamulka Somalida Bishii Oktober 2016, xiligaas oo ahayd xiliga ay da,aan roobabka Dayrtu. Waxay ahayd bishii April 2016, xiligii ugu dambaysay roob ka da,a Ismaamulka Somalida, xiligaas oo ay da,een roobab yar kuwaasoo ahaa kuwa Gu,uga.
Sida ay sheegayaan waraka madaxa banaan dadka iyo xoolaha ayaa isku si u dhimanaya maalin walba, dhimashada oo ay sabab u yihiin cudurada aan daawada lahayn iyo baa,ad iyo biyo la,aanta haysata xoolaha nool.
Khasaaraha dhabta ee ay keeneen cudurka iyo abaaruhu, ayaan la heli karin warbixinta dhabta ah ee ka jirta halkaas. Ismaamulka Somalida iyo dawlada Itoobiya ayaan ogolayn in la helo warar madax banaan. Television-ka ESTV oo ah warbaahinta kaliya ee laga helo wararka Ismaamulka Somalida, ayaa baahiya warar wanaagsan kaliya, kuwaas oo aan ka turjumin wararka dhabta ah.
Tirada dhimashada uu sababo cudurka daacuun calooluhu ayaa gaadha maalin walba 41 ruux, kuwaas oo ku kala dhinta gabalada Shabelle, Qoraxeey, Doolo iyo Afdheer.
Liyuu Boolisku Itoobiyan ma aha, Itoobiyana ma Aqoonsana!
Taariikhda Gudoonka Aqalka Sare Soomaaliya: Cabdi Xaashi, Bukhaari & Mowliid